कर्णाली आइपुग्यो ११ हजार ७८० जनालाई पुग्ने कोरोनाको खोप - A2Z Online Khabar A2Z Online Khabar
सुर्खेत, माघ १२ : कर्णाली प्रदेशमा पहिलो चरणमा लगाउने तयारी गरिएको कोरोना विरुद्धको खोप सोमबार आइपुगेको छ। भारतले अनुदानमा उपलब्ध गराएको कोरोना विरुद्धको खोपमध्ये कर्णालीका लागि करिब १२ हजार जनालाई पुग्ने खोप आइपुगेको कर्णाली प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ।
स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक डा. रविन खड्काका अनुसार दुई डोज हुनेगरी ११ हजार ७८० जनालाई पुग्ने खोप कर्णालीमा पुगेको छ। उनले यही साताको बुधबारदेखि नै उक्त खोप लगाउन सुरु गरिने जानकारी दिए।
सोमबार आइपुगेको कोरोना विरुद्धको खोप प्रदेशका हिमाली जिल्लाहरुमा मंगलबारदेखि नै ढुवानी गर्न थालिने खड्काले बताए।
‘खोप पठाउनका लागि पनि एअरपोर्ट तयारी अवस्थामा छ, माथिल्ला जिल्लाहरुमा जहाज आउनेवित्तिकै ढुवानी सुरु गरिनेछ’ उनले भने।
प्रदेशका हिमाली जिल्ला हुम्ला, जुम्ला, मुगु र डोल्पाको लागि नेपालगन्जबाट हवाइमार्गमा र अन्य जिल्लामा सुर्खेतबाट स्थलमार्गबाट खोप ढुवानी गरिने छ।
१० दिनभित्र पहिलो डोज लगाइने र पहिलो डोज लगाएको ४ हप्तापछि दोस्रो डोज लगाइने डा। खड्काले बताए । पहिलो चरणमा लगाउने गरी पहिलो र दोस्रो डोजको लागि करिब २४ हजार खोप आइपुगेको उनले जानकारी दिए।
कर्णाली प्रदेशमा पहिलो चरणमा कोरोना नियन्त्रण तथा उपचारका लागि खटिएका फ्रन्टलाईनर्सका लागि खोप लगाउने तयारी गरिएको छ।
‘पहिलो चरणमा स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाइकर्मी, संक्रमितको शव व्यवस्थापनमा खटिने सुरक्षाकर्मी, एम्बुलेन्स चालक र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई खोप दिइने छ,’ निर्देशक खड्काले भने, ‘दोस्रो चरणमा भने सदरमुकाम बाहिर पनि खोप लगाइने छ।’
उनका अनुसार पहिलो चरणमा सुर्खेतका लागि २ हजार ७८१, दैलेखका लागि २ हजार, जुम्लाका लागि १ हजार ७०२, कालीकोटका लागि १ हजार २१, जाजरकोटको लागि १ हजार १४५, सल्यानको लागि १ हजार १२३, मुगुको लागि ५४७, डोल्पाको लागि ५११, रुकुम पश्चिमको लागि ५०० र हुम्लाको लागि ४५० डोज कोरोना विरुद्धको खोप माग गरिएको थियो।
पहिलो चरणमा फ्रन्टलाईनर्सलाई खोप लगाइसकेपछि दोस्रो चरणमा सुरक्षाकर्मी, सञ्चारकर्मी तथा तेस्रो चरणमा नागरिकलाई खोप लगाइने डा. खड्काले बताए।